Akụkọ - Ndụmọdụ ịzụrụ igwe bekee / osise laser
Laser cutter osise
Cabinet Laser akara Machine
Kewara laser marking igwe
zuru cover laser marking igwe
obere akara laser
Ndụmọdụ ịzụrụ a laser ọnwụ / osise igwe
Kwụpụ 1: Mbipụta nke Mbụ Bụ Nkwado.
Enwere ọtụtụ mbubata ọnụ ala, ọkachasị na China, na ahịa. Mana lasers bụ igwe dị mgbagwoju anya ma ha mebie ma chọọ ka emezie ya. Gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ ị zụtara n'aka ya bụ ntụkwasị obi ma nye gị ezigbo nkwado maka gị na igwe ha mgbe ị zụrụ ya.
Lee ụfọdụ ajụjụ ị ga-echebara echiche:
Kedu otu esi sie ike ma ọ bụ dị mfe iji nweta akụkụ ndị ọzọ?
Hà nwere nkwado ọgbara ọhụrụ?
Kedu otu ọ dị mfe iji zaa ajụjụ?
Ha nwere ezigbo webusaiti?
Enwere nkuzi banyere otu esi eji na / ma ọ bụ dozie igwe ahụ?
Enwere ike ịkwalite ya?
Nzọụkwụ 2: Chohọrọ Ngwaọrụ. Nha na Ike.
Isi okwu abụọ m ga-elekwasị anya na ya mgbe ị na-ebu igwe bụ nha akwa ahụ na ike laser.
Igwe akwa akwa igwe ga-ekpebi otu nnukwu mpempe ihe ị nwere ike ịdaba na igwe iji belata ma ọ bụ kanye. Ihe ndina ka ukwuu ga-enye gị ohere ịkpụ ma ọ bụ kanye nnukwu iberibe na ọbụlagodi na ị na-eme ihe pere mpe, dị ka laser ịkpụ ọla, akwa buru ibu ga-enye gị ohere ịkpụ ọtụtụ iberibe otu oge karịa otu oge. Ọzọkwa ụfọdụ igwe nwere akwa edozi ma ụfọdụ nwere akwa nwere ike ịrịgo na mgbada. Ihe ndina na-arị elu na-enye gị ohere ịde ihe dị iche iche. Mgbucha dị omimi anaghị agbanwe agbanwe mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye logo na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ karịa na akpụkpọ anụ dị larịị, ịnwe akwa ị nwere ike wedata iji nweta akpụkpọ ụkwụ na igwe dị mkpa.
Ihe na-esote bụ ike nke laser. A tụrụ ike nke laser na Watts. Ihe watts ndị ọzọ dị ike laser bụ. Laser, nke m ji mee ihe, malitere site na laser 30 watt wee kwalite ya na 50 watt. Ike nke laser kachasị mkpa maka ịcha. Cheta ọkpụrụkpụ nke ihe na a laser nwere ike ebipụ kpebisiri ike site na Baịbụl hiwere isi n'ebe ndị lens bụghị ike nke laser. Yabụ ịgbakwunye laser dị ike karị agaghị ekwe ka ị belata ihe ndị toro eto. Mana ọ ga - enyere gị aka igbutu ọsọ ọsọ ma nwee ntụkwasị obi. Igwe na-esighi ike ga-apụta ịnwe nwayọ ala iji nwee ike ịkpụ ya.
M ga-atụ aro ka ị nweta igwe kachasị ukwuu ị nwere ike ịmalite site na laser na-esighi ike. Ihe ndina buru ibu ga-enye gị ohere ịrụ ọrụ na nnukwu aghụghọ ma ọ bụ bee ma kanye ọtụtụ iberibe otu oge. Nwere ike iwalite laser na ya ka ọ dị ike karịa mgbe e mesịrị.
Post oge: Nov-18-2020